Top News:- Dowladda Ugaandha oo ka Hadashay Ciidamada Americanka ah ee Gaaray Muqdisho | All idamaale News
Top News:- Dowladda Ugaandha oo ka Hadashay Ciidamada Americanka ah ee Gaaray Muqdisho
Taliska Ciidanka difaaca dalka Uganda ee lasoo UPDF ayaa ka hadlay oo soo dhoweeyay ciidamada Maraykanka ee dhowaan loosoo diray Soomaaliya, iyagoo sheegay inay qeyb weyn ka qaadanayaan xoojinta dagaalka ka dhanka ah argigixisada Alshabab.
Todobaadkii lasoo dhaafay, Charles Chuck Prichard, oo ah taliyaha ciidamada Maraykanka ee Soomaaliya, ayaa shaaciyay in tiro kamid ah ciidamadooda oo ka socda qeybta tababarka ciidanka cirka ee la yiraahdo 101st Airborne, ay tageen Soomaaliya.
Taliye Charles Chuck Prichard, ayaa cadeeyay ciidamadaan joogitaankooda Soomaaliya inuu ku egyahay dhammaadka bisha September ee Sanadkaan, isagoo sheegay inta ay joogaan Soomaaliya inay ka caawindoonaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Amisom kor uqaadida awooddooda saadka ay kula tacaalayaan argagixisada.
Afhayeenka ciidanka milatariga Uganda Brig Richard Karemire, ayaa sheegay ciidamada Soomaliya iyo kuwa Amisom inay casharo muhiim ah oo ku saabsan taatikada lagula dagaamo argigigixisada ka barandoonaan ciidamada Maraykanka ee Soomaaliya loosoo diray.
Uganda ayaa Soomaaliya waxaa ka jooga 6000 askari, waana dalka ugu badan oo ciidamadiisa milatarigu ka joogaan Soomaaliya, iyagoo qeyb ka ah howlgalka Amisom.